Aza Avela Hamingana Ny Fahalalahana Maneho Hevitra Ao Japana Ny Olana ISIS : Fanangonan-tsonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Febroary 2015 4:41 GMT
Kazuhiro Soda; sary natolotr'i Kazuhiro Soda
Hatreto dia nahazo sonia efa maherin'ny 1.000 ny fanambaràna iray ho fanohanana ny fahalalahana maneho hevitra ao Japana natombok'ireo mpanao gazety tamin'ny 31 Janoary.
Ilay fanambaràna , antsoina hoe “Fanambaràna Ho Fanoherana ny Famehezan-Tena” (“翼賛体制構築に抗するという「声明」”) dia nosoratan'ilay Japoney monina any New York, mpamokatra horonantsary fanadihadiana, Kazuhiro Soda.
Nivoaka nandritry ny olan'ny fakàna an-keriny vao haingana natrehan'i Japana tamin'iny Janoary iny ilay fanambaràna sy ny fangatahana fanaovan-tsonia. Nandrahona ny hamono ilay teratany Japoney Haruna Yukana ary Kenji Goto ireo mpitolona mahery fihetsiky ny ISIS raha toa ny governemanta Japoney tsy mandoa ny vidin'aina $200 tapitrisa.
Efa maty novonoin'ny ISIS i Yukawa sy Goto hatreo.
Taitra i Soda sy ireo hafa, taorian'ireo fifanakalozan-dresaka feno fanakianana henjana momba ny fomba nataon'ny governemanta Japoney hamahàna ilay olana, na izany tety anaty media sosialy, na avy amin'izy governemanta tenany ihany. Ilay antso ho amin'ny “famehezan-tena” dia nampahatsiahy an'i Soda sy ireo hafa ireo ny rivotra niainan'i Japana tamin'ny fotoanan'ny ady, izay tsy nanekena velively ny hisian'ny mpanohitra.
Ho setriny, nanoratra sy nandefa ity fanambaràna manaraka ity tao amin'ny bilaoginy i Soda, nanaingàny ireo mpamaky azy mety miombon-kevitra aminy, maro amin'izy ireny no mpanao gazety, mpanoratra, mpamokatra sarimihetsika ary mpaneho hevitra, mba hanao sonia ilay fanambaràna, amin'ny fandefasana mailaka ato:
(nadikan'i Nevin Thompson ho teny Anglisy)
Amin'ny maha-mpanao sonia ity fanambaràna ity, dia toherinay marindrano ary helohinay ny famonoana tamin'ny fomba feno habibiana nataon'ny ISIS ireo lehilahy Japoney roa, Kenji Gogo sy Haruna Yukawa .
Matahotra izahay fa mety hitarika herisetra sy habibiana bebe kokoa ny fitomboan'ny antony anaovana herisetra.
Mandritra izay fotoana izay, araka ny fisehoan-javatra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy, nisy ny tsindry mavesatra avy amin'ny fiarahamonina tao Japana nanjo ireo mpandefa onjampeo sy ireo fampahalalam-baovaom-bahoaka hafa mba hampihatra ny “famehezan-tena” (“自粛”, na jishuku) ary hisoroka ny fanakianana ny governemanta amin'ny fomba nikirakiràny ny olan'ireo takalonaina. Niakatra ho amin'ny haavo ambonimbony kokoa io tsindry avy amin'ny fiarahamonina io ka tonga hatramin'ny andrana hanaraha-maso ny fihetsik'ireo mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena manoloana ny politikan'ny governemanta.
Tena mampahatahotra fatratra io haavon'ny fanaraha-maso ny resaky ny daholobe io ho an'ny fiarahamonina demaokratikantsika eto Japana.
“Ao anatin'ny fotoan-tsarotra tahaka izany dia zava-dehibe tokoa ho an'ny tsirairay ary ny Japoney rehetra ny manohana tsy misy fepetra ny politikan'ny governemanta.”
“Raha manome lanja ny ain'olombeolona ianao, tsy tokony hanelingelina velively ny asan'ny governemanta.”
“Raha manakiana ny governemanta ianao amin'izao fotoana izao, dia tsy manao afa-tsy ny manampy sy mandrisika ny asa fampihorohoroana.”
Amin'ny fanarahana io làlan-tsaina io, natao tamin'ny feo mahery ny fanenjehana manakiana ny fomba nandraisan'ny governemanta Abe ny olan'ireo takalonaina azon'ny ISIS. Kanefa, manakona olana iray goavana kokoa io lalàn-tsaina io.
Voalohany indrindra, tsy nilaina loatra tamin'ny famahàna ny olan'ireo takalonaina ny politika sy hetsika tena nataon'ny governemanta Japoney.
Ary na dia hoe nitondra vokatsoa aza ireo politika ireo, dia natoraly tsotra fotsiny ihany ny hoe tokony harahana maso mandrakariva ny politika sy hetsiky ny governemanta, tsinkafonina amim-pitandremana fatratra, ary ataon'ireo mpifidy, ireo mpanao lalàna voafidy ary ny fampahalalam-baovaom-bahoaka fitsirihana izany.
Ankaotra izay, rehefa ampiasaintsika ny fomba fiteny hoe “toe-draharaha tsy azo anoharana” (非常時) ho toy ny lojika entina itakiana ny “famehezan-tena” rehefa manakiana ny politikan'ny governemanta, tokony tafiditra koa ny toe-draharaha tsy mahazatra toy ny loza nokleary sy ny horohorontany goavana ary ire loza voajanahary hafa.
Ohatra iray hafa, raha toa tafiditra amin'ny ady mitam-piadiana ifanaovana aminà firanena hafa i Japana, ny fampiasàna ny lojikan'ny “famehezan-tena” amin'izao fotoana, ny tohankevitra dia azo atao hoe “tsy manao afa-tsy ny manampy ny fahavalo ny fanakianana ny governemanta amin'io fotoana io. Ao anaty fotoan-tsarotra tahaka ireny dia tokonyho politika mampiray ny vahoaka ho tokana amin'ny fanohanana ny governemanta no hisy.”
Raha niditra tamin'ny Ady Lehibe Faharoa i Japana, nampoiasaina io lojika io mba hemtrahna ny “famehezan-tena” tamin'ny fiarahamonina Japoney sy hanemporana ny mpanohitra.
Nandritry ny vanimpotoana naha-te amin'ny governemanta ny tafika tao apana, nanana anarana ilay fomba fihevitra : 翼賛体制 na “yokusan taisei,” “rafitra iray ho fanohanana” ny tanjona an'adin'ny governemanta Japoney.
Amin'ny fanekena ny “famehezan-tena” tsy efa miatrika ny tena fomba fisainana mandritra ny fotoanan'ny ady ve isika, amin'ny maha-fiarahamonina, izay ahfahan'ny firenentsika manani-bohitra any amin'ny firenena hafa, ary mamela an'i Japana ho toy ny tanihay kila sy mainty ngilo?
Amin'ny famoronana zavatra izay fady ny mirsaka azy, tsy efa mitondra ny firenentsika ho anyamin'ny firodanana indray ve isika?
Ny marina dia fantatsika fa misy tranga sasany niseho vao haingana izay nanakianan'ireo manan-tsaina na ny onjampeo ny governemanta, ary fitobahana feo tao amin'ny aterineto sy ireo media sosialy hafa no nalaky nanome tsiny, nanao tsindry mba hampangnana ireo feon'ny mpanohitra.
Ny olana dia, ireo nalaky nanenjika ny fanakianana ny politikan'ny governemanta dia zara raha mahafantatra fa izy ireo ihany aza dia efa lohalahara amin'ny fitondrana fanovàna, ny “rafitra iray ho fanohanana” (翼賛体制, “yokusan taisei”) ny governemanta Japoney.
Ho an'ireny olona ireny, ny fiantsoana ny “famehezan-tena”, dia resaka “fahatsapan-tena” mandeha ho azy ary “fitondrantena ho toy y olon-dehibe.” Saingy tena marina ve izany ?
Tsy tena iakinan'ny ain-dehibe ve ny hampiasantsika ny fahaiza-mandinika mba hampitahàna izay nitranga fahiny sy ny mety hiseho amin'ny hoavy?
Hoy ny Artikla 21 ao amin'ny Lalàm-panorenana Japoney :
Iantohana ny fahalalahana mifamory sy manao fkambanana, hatramin'ny fanehoana hevitra, fanaovana gazety sy izay rehetra endrika hafa amin'ny fanehoana hevitra.
Hoy ny Artikla 12 ao amin'ny Lalàm-panorenana Japoney:
Ireo fahalalahana sy zo iantohan'ity lalàm-panorenana ity ho an'ny vahoaka dia ho arovana mandrakariva ao anatin'ny fisainana mandrakariva ny vahoaka, izay tokony hifehy tena tsy hanararaotra ireo fahalalahana sy zo rehetra ireo ary ho tomponandraikitra mandrakariva amin'ny fampiasana azy ireny ho amin'ny fiadanan'ny olon-drehetra.
Tsy maintsy manohana sy miaro ny fanahy sy ny zava-kendren'ny Lalàm-panorenana Japoney isika, indrindra ao anatin'ny “fotoana tsy mahazatra” tahaka izao. Tsy maintsy mamihina mafy, miaro ny fanahin'ny lalàm-panorenana isika, izay miantoka ny zontsika haneho malalaka ny hevitsika.
Io dia satria rehefa miaina teo-draharaha tsy mahazatra isika, amin'ny maha-fiarahamonina antsika, ilaintsika ny mandre karazana fomba fijery samihafa mikasika ny fomba hamahàna ilay olana. Io fomba fisaina io no tokony homen-danja.
Isika ankehitriny, amin'ny maha-vahoaka mampihatra ny zontsika haneho malalaka ny hevitsika, no manambara hanohitra amin'ny hery rehetra ny fandrahonana hampiforitra hanaraka ny “famehezan-tena” sady hisoroka ny fanakianana ny governemanta.
Tsy olana izay antoko mitàna ny governemanta, ny tsirairay ary ny olona rehetra amintsika mihitsy no hanaraka fotsiny ny feon'ny fieritreretantsika. Mivoady amin'ny tenantsika manokana isika tsy hisalasala mikasika izay soratantsika, tenenintsika, ataontsika sary na foronintsika.
Na iza na iza eto ambonin'ny tany dia afaka manao sonia ilay fanambaràna daholo, amin'ny fandefasana mailaka amin'ny hanyokusan@gmail.com.
Soda sy ireo hafa mpikarakara ity fanambaràna ity dia mangataka ny rehetra izay manao sonia mba hampiasa ny tena anarany.
Hatreto dia manodidina ny sonia 1.000 no efa azo, ahitàna an'i :
Hisy tafa ho an'ny mpanao gazety hatao ny Alatsinainy 9 Febroary amin'ny 5 hatramin'ny 6 ora hariva ao amin'ny Efitrano B 104 ao amin'ny Tranoben'ny Mpanolotsaina ao Tokyo.
Raha mila fanazavana bebe kokoa, tsidiho ny: http://hanyokusan.blogspot.jp/2015/02/blog-post.html
Thank you avylavitra!
06 Febroary 2015, 15:54
16 Marsa 2015, 06:25